Ampifanaraho amin'ny Google Apps ny orinasanao
Alatsinainy Aprily 12, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Michael Reynolds
Izay mahalala ahy dia mety mahalala fa mpankafy be aho Google Apps. Fanambarana feno ihany koa, SpinWeb dia Famandrihana amin'ny Google Apps nahazo alalana, noho izany dia mazava ny fanolorantenantsika ny vokatra. Betsaka ny antony tsara tokony hampientanentana ny Google Apps, na izany aza… indrindra amin'ny maha orinasa kely.
Google Apps dia tena mpisolo toerana an'i Microsoft Office. Rehefa miteny izany amin'ny olona aho dia misalasala be izy ireo indraindray, ka izay no antony anaovako zavatra iray manontolo seminera momba ny lohahevitra hanome fanazavana bebe kokoa momba io lohahevitra io. Orinasa manao ny fitsambikinana mankany amin'ny Google Apps no hampiasa vola amin'ny fotodrafitrasa iray misy email, kalandrie, fitantanana antontan-taratasy, fihaonambe an-tsary ary fitantanana fifandraisana izay mifaninana amin'ny Microsoft Exchange amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny. Andao jerena.
Mailaka Google: Alternative matanjaka amin'ny fifanakalozana
Ny mailaka ao Google Apps dia ny Gmail izay fantatsika sy tiantsika rehetra. Na izany aza, Google Apps dia mamela anao hametaka ny mailakao amin'ny anaran'ny orinasa misy anao mba hahazoana antoka fa manana marika marika izy io. Tsy misy te hampiasa mailaka an'ny mpanjifa ho an'ny orinasa, sa tsy izany? Google Apps dia Gmail amin'ny raharaham-barotra, ary misy fiasa fanampiny toy ny politikam-pandrefesana spam sy politika fampidirana. Ahitana fitaovana fifindra-monina koa izay manamora ny fifindra-monina avy any Exchange. Ny mailaka dia azo idirana amin'ny alàlan'ny tranonkala, mpanjifa mailaka (toa ny Outlook na Apple Mail), ary ny fitaovana finday. Ny quota default ho an'ny mpampiasa tsirairay dia 25GB, izay malala-tanana tokoa.
Ho fanampin'izay, ny sivana spam sy virus ao amin'ny mailak'i Google no tena tsara indrindra ao amin'ny indostria. Mahalana aho no mahita lafy ratsy ary ny ankamaroan'ny mailaka tsy ilaina dia tratra sy voasivana. Ny famindrana mankany amin'ny Google Apps dia manala tanteraka ny filan'ny sivana ankolafy fahatelo.
Fampifanarahana toy ny zazalahy lehibe
Ireo fampisehoana kalandrie ao Google Apps dia mahatalanjona. Ny fikambanana dia afaka mandahatra fivoriana miaraka amin'ny olona sy ny enti-manana (toy ny efitrano fihaonambe, ny projecteur sns) amin'ny tsindry vitsivitsy monja. Ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia afaka mijery ny fandaharam-potoanan'ny mpiasa hafa koa ary mahita fampahalalana maimaimpoana / be atao amin'ny fomba mora foana. Izany dia mahatonga ny fivoriana fandaharam-potoana ao anatin'ny fikambanana ho tampoka. Ny fampahatsiahivana momba ny fivoriana dia azo alefa amin'ny alàlan'ny mailaka na hafatra an-tsoratra ary afaka ampanjain'ny mpampiasa tsirairay.
Sehatra birao feno ao amin'ny rahona
Tena faly aho momba ny fampiasa Docs amin'ny Google Apps. Ny ankamaroan'ny fikambanana dia mampiasa Word, Excel, ary PowerPoint ho lozisialy birao fanaovany birao. Midika izany fa apetraka amin'ny solosaina rehetra ny rindrambaiko, ary koa ny manohana sy mitazona azy. Mety ho lafo izany. Izany rehetra izany dia afaka miala amin'i Google Docs. Ny fikambanana dia afaka mitahiry ny antontan-taratasy rehetra amin'ny toerana iray ary mandamina azy ireo amin'ny fomba tena malina.
Ny zavatra tsara momba ny Google Docs dia ny fanesorana ny fahasosoran'ny “iza no manana ny kinova farany an'io antontan-taratasy io?” Miaraka amin'i Google Docs, ny antontan-taratasy rehetra dia noforonina mivantana tao amin'ny rafitra ary iray ihany ny kopia misy ireo rakitra atolotray amin'ny fotoana rehetra. Ny mpiasa dia afaka miara-miasa amin'ny antontan-taratasy ary manisy fanovana ary ny fanitsiana rehetra dia arahana mba hahafahanao miverina amin'ny kinova taloha ary mijery hoe iza no nanao.
Ny fikambanana dia afaka mametraka ny fitehirizam-bokin'izy ireo amin'ny Google Docs ary mandeha tsy misy taratasy 100% satria afaka mampakatra karazana rakitra ianao. Hovaina ho Google Doc azo ovaina izy io na tehirizina tsotra fotsiny amin'ny mpizara rakitra. Google Docs dia manome anao mpizara rakitra, fizarana fiara ary birao rehetra ao anaty iray fa tsy misy fitaovana na rindrambaiko hanahirana anao.
Makà manokana amin'ny Google Chat
Endri-javatra mahafinaritra iray hafa an'ny Google Apps no endri-pifanakalozan-tsary. Izay mpiasa manana webcam dia afaka mandray anjara amin'ny seha-pivorian'ny video miaraka amin'ny mpampiasa iray hafa mba hanamorana ny fiaraha-miasa. Ny kalitao dia tsara ary afaka mifampiresaka amin'ireo mpampiasa Google hafa ivelan'ny orinasanao ianao. Tsy dia milay loatra toy ny sasany amin'ny vahaolana amin'ny kaonferansa video ataon'ny orinasa fa mandeha tsara izy io ary vahaolana tsara ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Ny mpiasan'ny finday
Ireo fiasa rehetra ao Google Apps miasa tsara amin'ny finday. Ny kalandrie iPhone-ko dia ampifandraisina tsara amin'ny kalandrie Google-ko ary afaka manangona antontan-taratasy amin'ny findaiko koa aho. Afaka manitsy antontan-taratasy amin'ny findaiko aza aho! Ny dikan'izany dia hoe afaka mitondra aho rehetra ny antotan-taratasin'ny orinasako amiko na aiza na aiza alehako. Eny, marina izany - ny antontan-taratasy rehetra ao amin'ny orinasako dia azon'ny finday izao. Miasa tsy misy tohiny ihany koa ny mailaka ary manamora ny fifampiresahana eny an-dalana.
Ny fiarovana ny rahona
Iray amin'ireo teboka fivarotana tsara indrindra amin'ny Google Apps ny tsy mila fampiasam-bola amin'ny fampandehanana fitaovana. Ny zava-drehetra dia ampiantranoina ao amin'ny foibem-pikarohana Google ary ny interface dia voarindra SSL. Tsy vitan'ny hoe manangona vola be fotsiny izany, fa manovaova kokoa ny fandaminanao. Ny mpiasa virtoaly dia afaka miditra ao amin'ilay rafitra na aiza na aiza, lasa mora kokoa ny miasa birao, ary azo antoka kokoa ny tahirin-kevitrao noho ny ao amin'ny biraonao. Te-vazivazy aho fa mety may ny biraontsika rahampitso ary mety tsy ho tsikaritray akory satria hitohy hiasa ny rafitray.
Safidy tsara ho an'ny fikambanana
Ny kinova fandraharahana an'ny Google Apps mitentina $ 50 isaky ny mpampiasa isan-taona ary azo atsangana haingana dia haingana. Nampihetsika ny kaontiko ary niasa sy nihazakazaka tao anatin'ny andro vitsivitsy ny mpanjifako. Raha mahatsapa fanaintainana amin'ny fifandraisana amin'ny rafitra misy anao ianao izao, te-tsy hampiasa taratasy, mila miara-miasa tsara kokoa amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa, na te-hanomboka fotsiny mitahiry vola amin'ny rindrambaiko amin'ny biraonao, Mamporisika anao aho hanandrana ny Google Apps.
Azafady mba ampahafantaro ahy raha afaka manampy aho. Te-handre ny zavatra niainanao tamin'ny Google Apps koa aho, koa miangavy, avelao ny fanehoan-kevitra eto ambany!
Demografikan'i Martech Zone
Maninona ary ahoana no fisoratana anarana ary ahazo isa DUNS
Apr 12, 2010 amin'ny 10: 55 AM
Amen. Izahay dia mitantana ny orinasanay iray manontolo (http://raidious.com) amin'ny Google Apps, ary tsy nanana olana izahay - traikefa tena tsara. Enga anie izy ireo hanao fitaovana fitantanana tetikasa / workflow fitaovana ary fitaovana CRM hiaraka aminy!
Apr 12, 2010 amin'ny 11: 29 AM
Raha ny marina, TactileCRM dia miombona amin'ny Google Apps amin'ny alàlan'ny Marketplace 🙂
Apr 13, 2010 amin'ny 7: 59 AM
Manoro hevitra ny Google Apps ho an'ny mpanjifako rehetra aho, na inona na inona habeny. Izaho koa dia nanangana azy ireo ho an'ny maro amin'izy ireo ka mila mijery ny fizotry ny mpivarotra nahazo alalana. Ny iray amin'ireo zavatra tsara hitako tamin'ny fampiantranoana an'i MediaTemple dia ny fahafahako mitantana ny fikirana DNS rehetra ao amin'ny mpampiantrano. Ny saram-pisoratam-pandraketako dia miampanga amin'izay fandrindrana DNS mandroso rehetra, noho izany dia nitahiry vola roa tany aho.
Apr 13, 2010 amin'ny 10: 59 AM
Diito! Nilaozako ny Outlook tamin'ny 1 Janoary 2010. Fanapahan-kevitra sy fanapahan-kevitra noraisina izany. Nivoaka ny Google Apps rehetra ary tsy nanenina mihitsy. Izaho koa dia mamporisika ny mpanjifako rehetra hanao "GO GOOGLE" - misy dikany amin'ny fomba maro hanaovana izany.